Muuse Biixi oo bulshada dhexdeeda ku takooraya dad looga shikiyay Kooro - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Muuse Biixi oo bulshada dhexdeeda ku takooraya dad looga shikiyay Kooro
Waxa xalay jeelka loo taxaabay mulkiileyaasha Huteel Hargeysa ku yaala oo lagu magacaabo SKY kadib markii lagu yiri waxaan idiin wadnaa dad looga shikisan yahay hargabka Kooro iyo kuwa qababa.
Mulkiileyaasha Huteelka ayaa u sheegay wasiirada Muuse Biixi iyo askarta la socotey inayna raali ka ahayn oo dadka Koorada qaba la tagaan meel kale oo ka baxsan magaalada.
Kadib waxa Muuse Biixi amrey in jeelka loo taxaabo ilaa haddana waxay u xiran yihiin isaga ayuu yiri shaqaale u hadley huteelka SKY oo cadho ka muujiyay sida loogu xoog sheeganayo hantidooda.
”Gabadh aad u da’yar oo Ilahay caqli badan siiyay aadna ula socota cudurka Kooro iyo sida uu ku faafo ayaa sheegtay inayna intaa ay maqleysay cudurka Kooro ayna maqal dad lagu dhex takooro magaalo dhexdeeda in loo dhiso meelo gooniya mooyee.
Waxa kale oo soo baxdey in haba yaraatee ayna jirin taxadarkii ugu horeeyay ee ahaa in dadka ka soo degaya madaarka welli u furan diyaaradaha Itoobiya aan la nadiifin basaska ay raacayaan oo isla baskii ay taabteen dib loogu qaado dadkale ayuu yiri Faysal Waraabe.
Si kastabna ha ahaatee Muuse Biixi ayaa loogu cambaareeyay mulkiileyaasha uu jeelka u taxaabay. ”Waxay mujinaysaa maamul xumadda heerka uu joogo asagoo dawlad sheeganaya dadka hantidoodana isticmaalaya ayuu yiri Xusee Warsame.
Warbixintii Maxamed Yusuf